:: My Little World ::: Cartoons : IT Security Awareness - Power Down
Posted by Nay Nay Naing at 12/17/2008 08:12:00 PM
၀င်းဒိုး အပ်ဒိတ် လုပ်တာနဲ့ မီတာခ ဘယ်လိုပက်သက်သလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဘူးး
အိုင်တီ ဗဟုသုတနည်းနည်းဝေးလို့ပါ :D
Wednesday, December 17, 2008 8:43:00 PM
ဝေးတာကွာ...။ ၀င်းဒိုးကို အပ်ပ်ဒိတ်မလုပ်တော့ စီကျူရတီ ဟာကွက်တွေကို ဟက်ကာတွေက တွေ့တော့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို ၀င်နှောက်နိုင်တယ်။ သုံးလို့ မရအောင် ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်။ သုံးမရတော့ မိဘတွေအတွက် မီတာခ သက်သာတာပေါ့အေ့...။
Thursday, December 18, 2008 5:28:00 AM
နားမလည်တော့ ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ သိတဲ့လူတွေကို ဆရာလုပ်ပြီး စစ်ခိုင်းလိုက်ဦးမှ :P
မမျှော်လင့်ဘဲ လာလည်သွားတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ။
Thursday, December 18, 2008 6:43:00 AM
And need extra electricity charges for repairing computer. It's not saving in the end :P.
yes, ur right anonymous!
the parents have to pay of electricity charges for repairing computer.they cant save at the end.
အမ်.. ..jurassic ရဲ့ comment ၀င်လာတာတွေ့ လို့လာဖတ်တာ. အခုနကတင် reply ပြန်တဲ့ comment အရှည်ကြီးရေးတင်တာ ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိဘူး.. publish မနှိပ်ပဲ preview နှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်မိတယ် ထင်တယ်။ မှားပါတယ်။
မေးတဲ့ သူတွေကလည်း မေးထားတယ်၊ မနေနိုင်တဲ့ သူကလည်း ၀င်းရှင်းပြတယ်။ ခုတော့ နည်းနည်း ဝေးတယ်ဆိုတဲ့ ကို jurassic၊ မီတူးဆိုတဲ့ မခင်ဦးမေ နဲ့me3ဆိုတဲ့ ကို strike တို့ရှင်းလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်ကနေ comment ပြန်ရတာ အဆင်မပြေသလို၊ အိမ်ရောက်တော့လည်း ရှုပ်နေတာနဲ့reply နောက်ကျနေတတ်ပါတယ်။
မမီယာ လည်း Window OS သုံးတယ်ဆိုရင် Window Update ကို Automatic Updates လုပ်ထားပါ။ Microsoft ကနေ Security Update တွေ အမြဲ ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ မမီယာရဲ့ ဘလော့ကို ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ စာတွေလိုက်ဖတ်တာ မပျင်းပေမယ့် comment ရေးရာမှာ ပျင်းတတ်အတွက် ကျွန်မ အရင်က comment မချန်ခဲ့တာပါ။ ဒီက comment တွေတောင် reply ပြန်ဖို့အတော်လေး အားယူနေရတယ်။
အမည်မသိ >> ကျွန်မ အမြင်အရ ကွန်ပြူတာ ပြင်ဖို့ ဆိုပြီး extra electricity charges ကုန်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ စက်မပျက်လည်း ကွန်ပြူတာ ဖွင့်သုံးနေမှာပဲမို့တူတူပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ပြင်ချင်မှ ပြင်မှာလေ။ နိုင်ငံခြားမှာက laptop အသုံးများပြီး တစ်ခုခုဆို ဆိုင်ပို့ ပြင်ခိုင်းတာများတာယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်ဆိုတာင် ဒီတိုင်းပြင်လို့ မရ ပစ္စည်းပြန်ဝယ်ထည့်ရမှာ တွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ ၀ယ်ဖို့ အချိန်ယူရမယ်။ သူ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူ ပြင်မှာလား၊ မိဘ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးမှ ပြင်နိုင်မှာလား။ ဒါတွေက ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မသာ မိဘနေရာမှာဆိုရင် အလကား အကျိုးမရှိတာတွေအတွက် ကွန်ပြူတာတချိန်လုံး သုံးနေတယ်ဆို ပြင်ဖို့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံချက်ချင်း ထုတ်ပေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကွန်မန့် ဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေးတွေပါ။
Thursday, December 18, 2008 9:23:00 PM